आउदो बर्षमा मालामाल हुदैछन् यी ६ राशिका ब्यक्ती, कतै तपाईको त परेन ? – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र १०, २०७७ समय: ४:११:२३
शनि मकर राशिमा रहेको छ तथा वृहस्पति चैत्र महिनासम्म मकर राशिमा रहने छ । त्यसपछि वृहस्पति कुम्भ राशिमा रहने छ । राहु वृष राशिमा तथा केतु वृश्चिक राशिमा वर्ष भरिनै रहने देखिन्छ । यी नै ग्रहको आधारमा ६ राशि भाग्यशाली बन्दैछन् ।
तपाइको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सफलता हात पार्न सक्नुहुनेछ तपाइको कुण्डलीमा वृहस्पति,शनि,राहु,केतु राम्रो अवस्थामा अर्थात उच्च,स्वगृही,यूवा अवस्थाको छ भने तपाइले पूर्णफल प्राप्त गर्नु हुनेछ ।
कुन-कुन राशि भाग्यशाली ?
मेष राशिका व्यत्तिलाइ १० स्थानमा शनि,गुरुको अवस्थाको कारणे गर्दा तपाइको बिग्रेका काम बन्नुका साथै नँया कामको थालनी हुनेछ सरकारी जागीर पाउन सक्ने अवस्थाहरु देखिन्छ ।
वृष राशिका व्यक्त्तिलाई भाग्यस्थानमा शनि,गुरुको कारणले गर्दा भाग्यवृद्धि हुनुका साथै गरेको काममा सफलता तथा नयाँकामको अवसर र सम्पूर्ण क्षेत्रमा सफलता हात पर्दछ ।
तुला राशि भएका व्यक्त्तिलाई चौथो स्थानमा शनि,गुरुको कारणले गर्दा घर,जमीन जोड्न सक्ने तथा वाहन सुख प्राप्त हुन सक्ने र घरायसी समस्या हरु समाधान हुदै जाने देखिन्छ ।
दोस्रो स्थानमा शनि, गुरुको रहने कारणले गर्दा बोलीको प्रभाव वढ्नुका साथै अचल सम्पत्ति किन्न सक्ने तथा पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
मकर राशिको राशिमानै शनि,गुरु रहने कारणले गर्दा मान सम्मानमा वृद्धि हुने तथा उच्च राजनीतिक पद प्राप्त गर्न सक्ने रोकिएको काम वन्ने जस्तो देखिन्छ ।
मीन राशि भएका व्यत्तिको आय स्थानमा शनि,गुरु रहने कारणले गर्दा आयमा वृद्धि दाजु,भाइ सँगको सम्वन्धमा सुधार विदेश यात्रा तथा रोकिएको काम वन्नेछ ।
सम्पूर्ण फलको लागि भिडियो हेर्नु होला ।
यो पनि – धनी बन्ने इच्छा छ ? धर्मशास्त्र भन्छ- जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी ९ गल्ती
धनी बन्ने इच्छा सबैको हुन्छ । तर कसैलाई जति मेहनत गरेपनि आर्थिक संकट आइरहन्छ। मेहनत गरे अनुसार पैसा कमाउन शास्त्रका केही नियमको पनि पालना गर्न जरुरी छ। आज हामी तपाईलाई गर्न नहुने केही गल्तीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
महिलासँग दूश्मनी शुक्र भौतिक सुखका कारक ग्रह हो । साथै स्त्री प्रति शुक्रको प्रभाव रहनेगर्छ । यसैले शुक्र प्रधान यस वर्षमा महिलासँग राम्रो सम्बन्धमा रहनुहोस् ।
–देवी लक्ष्मिको मुर्ति एक भन्दा धेरै आफ्नो कोठामा नराख्नुहोस् –
शुक्रबारको दिन देवी लक्ष्मिको पुजा विशेष फलदायक मानिन्छ । तपाईंको घरमा धेरै देवीको मुर्ति छ भने आफ्नो सबै कोठाहरुमा अलग–अलग राख्नुहोस् ।
–– च्यातिएको पर्स
यदि तपाईंको पर्स च्यातिएको छ भने त्यसलाई बदल्नुहोस् र काम नलाग्ने चीजहरुलाई फाल्नुहोस् । एउटा सिक्का शुक्रबारको दिन देवी लक्ष्मिको मन्दिरमा चढाउनुहोस् अर्को सिक्कालाई रातो कपडामा बेरेर पर्समा राख्नुहोस् ।
– जीवनसाथीसँग तालमेल बनाइराख्नुहोस् । धन सम्बन्धी विषयमा जीवनसाथीसाग छलफल गरेर मात्रै फैसला गर्नुहोस् ।
– विहान उठ्ने वित्तिकै ऐना नहेर्नुहोस् । विहान उठेर दुवै हात जोडेर देवी लक्षिमको ध्यान गर्नुहोस् ।
– गणेशजीलाई नभुल्नुहोस् । धनसम्बन्धी काम गर्न जानुभयो भने गणेशको पुजा गर्न नभुल्नुहोस् । बुधबारको दिन अनिवार्य रुपमा ५ वटा दुवो चढाउनुहोस् ।
– बेलुका कसैलाई पैसा नदिनुहोस् । सुत्नुभन्दा अघि पैसा दिनु राम्रो नहुने बताइन्छ ।।
– सोमबारको दिन पीपलको पुजा नगर्नुहोस् । यो दिन पीपलको पुजा गर्दा घरमा अलक्ष्मिको प्रवेश हुने विश्वास छ ।
-परिवारमा बहिनी र छोरीलाई अप-शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् । धन सम्बन्धी काम शुक्रबार गर्नु शुभ रहने जनाइएको छ।
Last Updated on: March 23rd, 2021 at 4:11 am
३५२०६ पटक हेरिएको